Top: Yusuf Garaad oo warbixin xasaasiya ka qoray xariga Aweys iyo balan ka baxa Dowladda- Madaxda la garaacay 01.07.13 Riix
Topnews :-Yusuf Garaad oo warbixin xasaasiya ka qoray xariga Aweys iyo balan ka baxa Dowladda- Madaxda la garaacay .
02 July 2013 Waagacusub.com-Shiikh Xasan Daahir Aweys oo ka mid ahaa Shabaab ayaa Muqdisho lagu xiray. Buuq ka dhashay xariggisuna waxaa uu sababay in ciidanku ay garaacaan arga-gaxna geliyaan Cuqaal beeleed, Xildhibaanno iyo Wasiirro hore. Arrintaan ayaan qormadeyda ku eegayaa aniga oo ka soo billaabaya markii Xasan Daahir uu tegey Cadaado. Maamulka Ximan iyo Xeeb waxay mudan yihiin in Dowladdu ay ku ammaanto ugana mahadceliso in Xasan Daahir Aweys oo gacantooda soo galay, ay si nabad ah u wareejiyeen. Waxay ku wareejiyeen akhyaar iyaguna ku ammaanan in ay Xasan Daahir oo qorshayaal kale damacsanaa ay u diidaan fursad aan ahayn in uu iyaga Muqdisho u raaco.
Cuqaashaasi waxay ku doodayaan in Mas’uuliyiinta ugu sarreysa dowladda ay damaanad ka haysteen in Xasan Daahir la dejinayo guri lagu ilaaliyo. Laakiin sida ay ayagu sheeganayaan, markii Xamar ay yimaadeen, Xasan xabsiga ayaa loo taxaabay, iyagana waa la garaacay. Qaar iyaga ka mid ahna daqarro iyo dhaawacyo kale oo loo geystay ayay saxaafadda u soo bandhigeen.
Anigu ma joogin goobta kamana warqabo xaqiiqada. Ma garan karo in ciidanku iyaga oo aan naftooda la baxsan waayin sabab ay dad u garaaci karaan, weliba duqey xurmo mudan ah.
Taas Dowladda waxaa looga baahan yahay in ay shacabka u fasirto sida ay wax u dheceen, isla markaana ciddii dembi yeelata lagu qaado. Tan kale, waa in ay ciidankeeda iyo Taliyaashiisa ay xaqiijisaa in aanay marnaba u gacan qaadin dad rayid ah.
Arrinta xabsiga haddaan soo koobo, Xasan Daahir wuxuu noqonayaa ninkii ugu horreeyay ee Madax ah ee lagu soo oogo dacwad ku saleysan in uu dalka dembi ka galay loona xiro. Khaladna ma ahan oo waa in ay mar uun billaabataa, haddii la doonayo in caddaalad darrada laga baxo.
Waxaa igala muhiimsan in uusan noqon ninkii u dambeeyay. Waa in qorshuhu ahaadaa in dadka dembiyada galay marba inta taagtu ay gaarto la soo qabto. Dambiilyaasha waxaa ugu dambeeyay kuwa dagaalka hadda Kismaayo ka socda ka mas’uulka ah. Kuwii madaafiicda ku garaaci jiray Muqdisho iyo meelo kale. Kuwa Shabaab ka tirsanaan jiray iyo qaar waliba u furay Xeryo ay ku tababbartaan. Kuwa Shabaab lacagta siiya. Iyo kuwa hantida shacabka iyo midda Qaranka xaday ama hantida ma guurtada ah xoog ku haysta.
Dadkaas dembiilayaasha ah ee aan tilmaamayo qaarkood waa Madax, qaar kale waa Ganacsato, iyaga iyo kuwa demebiyadaas galay inta nool dhammaantood xorriyad ayay ku mushaaxayaan. Dalka gudihiisa kuwa joogaa waxay ugu badan yihiin Muqdisho. Ma lihi maanta ha la soo wada xiro laakiin waa in dhiirrideeda iyo daacadnimadeeda la yeesho.
Ragga aan sawirradooda arkay ee leh Ugaas, Cuqaal aftahana, Culmaa’u diin, Xildhibaanno, Wasiirro hore, Jeneraallo, qurba-joog iyo qaar kale in ay ku fekerayeen in iyaga oo qabiil ah, oo aan cid kale la ogeyn ay intay Muqdisho keenaan Xasan Daahir ay haddana dowladda iyo kumanyaalka AMISOM ay u diidi karaan in ay la wareegaan. Malahaygana, sabab ay u doonaan oo ay u soo qaadaanna maba jiri lahayn.
Marka hadday jirto in markii hore ballan loo qaaday Cuqaasha ninkan khasabka ku keenay Muqdisho, waa in loo fuliyaa ballantii lala galay. Ballan baxyadu shakhsiga kuma habboona iskaba daa dowlad dhan. Haddaan ballanqaadkaasi jirin Dowladdu waa in ay noo sheegtaa.
Xasan Daahir nin sahlan ma ahane haddii ay quwado kale meesha soo galeen oo aan maya lagu dhihi karin, dowladdu waa in ay ogaataa in laga gar leeyahay markaasna ay si uun u qancisaa duqeyda.
Ilaa ay Dowladdu arrinkaan ka hadleyso ama ay si hoose u xallineyso waxaa shacabku ku khasban yahay in uu rumeysto waxa uu maqlayo arkayana. Waxaa uu maqlayaa Odayaal sheeganaya in la khiyaamay oo ballantii lala galay markay intooda fuliyeen intii kale looga baxay. Wuxuuna arkayaa Madax dhaqameedyo sheeganaya in la fara saaray kuwaas oo muujinaya daqarrada gaaray.
Qormadeyda tan xigta, haddii Allah oggolaado, waxaan rajeynayaa in aan ku eego ninka uu yahay Xasan Daahir Aweys. Kala soco Blog geyga.
By Yusuf Garaad Omar